ဂျော်ဒန်ဘဏ္theာရေး Petra ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ ခရီးသွားသတင်း
ဂျော်ဒန်ဘဏ္theာရေး Petra ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ
Mariela Carril | | လမ်းပြ, ယော်ဒန်မြစ်
ခြော၏ရှုခင်း Petra မင်းသူ့ကိုသိလား။ အဲဒါက ဂျော်ဒန်ပို့စကတ် ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အတိတ်တံခါး၊ နက်နဲသောအရာ၊ အမှန်တရားကတော့မင်းရဲ့ဂုဏ်အသရေရှိတဲ့လှပတဲ့ဒီနေရာကိုလေ့လာစရာမလိုဘဲဂျော်ဒန်ကိုသွားဖို့စီစဉ်လို့မရဘူးဆိုတာပါ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် 1985.
ထိုနေရာတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သာဤခေါင်းစဉ်သည်အချိန်ကုန်လွန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်တွင်ကျန်ရှိနေသောဖုန်မှုန့်၊ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်တုံး၊ ဗိမာန်နှင့်အနုပညာတိုင်းအတွက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Petra သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လက်တွေ့ကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်။
2 Petra ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်ရမလဲ
ဒီမြို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက Nabataean နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်, ထိုနိုငျငံတျော ရောမအင်ပါယာသို့စုပ်ယူခဲ့သည် မြို့တော်ကြီးကိုကြီးထွားလာရန်အရေးကြီးသည့်စီးပွားဖြစ်စင်တာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ငလျင်ဒဏ်ခံရသော်လည်း၎င်းသည်အချိန်နှင့်သာ Saladin အချိန်တွင်သာတည်ရှိသည်။ ၁၁၀၀ ပြည့်နှစ်သို့ရောက်သော်၎င်းကိုသဲကန္တာရလက်တွင်ထားခဲ့ပြီးမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျက်သွားခဲ့သည်.
ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့ဘဏ္theာများစွာလိုပဲ ၁၉ ရာစုမှအလင်းပြန်လာ၏ ဥရောပစူးစမ်းရှာဖွေသူများ၏လက်မှဤကိစ္စတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Burckhardt ဟုခေါ်သည်။ သူ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည်အခြားစူးစမ်းရှာဖွေသူများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သောအလှည့်သည်အပျော်တမ်းရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တစ် ဦး ထက်ပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည့်အလွန်ကောင်းသောပုံဥပမာများကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပထမဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူးဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ Petra သည်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဏ္oneာရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်၊ အားလုံးကသင့်ရဲ့စမှတ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ သငျသညျ amman ၌ရှိကြ၏, ဂျော်ဒန်၏မြို့တော်, ဘတ်စ်ကားတွေအများကြီးရှိတယ် မနက် ၆း၃၀ မှထွက်ခွာ။ မနက် ၁၀း၃၀ ခန့်တွင်အပျက်အယွင်းများကိုရောက်ရှိသည်။ သူတို့ကကုမ္ပဏီမှပါ ဂျက်ဘတ်စ်ကား။ ပြန်လည်ပတ်မှုကိုညနေ ၅ နာရီတွင်စတင်သည်။ လက်မှတ်သည်ခြေတစ်ချောင်းလျှင် ၁၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရေယာဉ်စုစုပေါင်း5မှာခေတ်မီကားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအခြားခရီးစဉ်များစွာကိုပြုလုပ်သည်။
သင်တို့သည်လည်းသုံးနိုင်သည် Wadi Musa သို့သွားမည့်အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများ Mujamaa Janobi ဘူတာမှထွက်ခွာခြင်း။ ခရီးစဉ်များသည်နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၄ နာရီထိဖြစ်ပြီးပြောင်းပြန်နံနက် ၆ နာရီမှ စတင်၍ နောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုည ၁ နာရီတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ option တစ်ခုပါ ကောင်းပြီ၊ ဒါကတစ်ဝက်ကုန်ကျတယ်။ ¿သင်လုပ်နိုင်သည် အငှားယာဉ်စီးပါ? ဟုတ်ပါတယ်၊ အမ်မန်းကရော Queen Alia လေဆိပ်ကပါ။ သင်ကားနဲ့သွားရင် 90 JD၊ သွားရင်သွား ၁၃၀ စျေးနှုန်း။ လိမ့်မည်လူတစ် ဦး နှုန်းမဟုတ်ယာဉ်တစီးလုံးအတွက်။
အများပြည်သူမီနီဘတ်စ်များသည်လည်း Aqaba နှင့် Wadi Musa တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသည် မြို့နှစ်မြို့၏ရဲစခန်းများအကြားခရီးလှည့်လည်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၀ န်ဆောင်မှုငါးခုရှိပါသည်။ သောကြာနေ့များတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပထမတစ်ခုသည်နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင်ဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝထွက်ခွာသွားသည်။ ဒီခရီးကိုတစ်နာရီခွဲနှစ်နာရီကြာပါတယ်s ကိုသင်5မှ6JD အကြားလက်မှတ်တွက်ချက်ရပေမည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရဲစခန်းမှထွက်သွားသောအဖြူရောင်တက္ကစီကိုလည်းသင်ယူဆောင်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာ JD ၃၅ ၀ န်းကျင်ရှိပေမယ့် ၄ ယောက်အထိတက်နိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်အငှားယာဉ်များလည်းရှိသည်၊ ၎င်းသည်မင်းတို့ကိုအစ္စရေးနှင့်နယ်စပ်သို့ပင်ပို့ဆောင်။ JD ၉၀ ခန့်ရှိသည်။
Wadi Rum သို့မဟုတ် Madaba ကဲ့သို့သောမြို့များမှသင်သည် Petra သို့လည်းသွားနိုင်သည်။ မနက် ၆ နာရီမှဘတ်စကားဖြင့်။ ခရီးသည်များကို Wadi Rum itor ည့်သည်စင်တာတွင်ကောက်ယူပါ၊ ရမ်ရွာတွင်ရပ်။ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင်ပက်ထရာမြို့သို့ရောက်ရှိပါ။ ၅ ဒေါ်လာ၊ ၅ ဒေါ်လာလောက်ကုန်ကျတယ်။ တက္ကစီတွေလည်းရှိတယ်။ သငျသညျ Madaba join ချင်လျှင်အတူတူပင်။
ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားသည်အလွန်လှပသည့်ဘုရင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ဤခရီးသည်အထူးသဖြင့်လှပသည်။ သို့မှသာ ၃ နာရီတွင် ၀ တီမူဆယ်သို့မလာမီတစ်နာရီ Wadi Mujib နှင့်အခြား Karak ရဲတိုက်တွင်ဓာတ်ပုံမှတ်တိုင်တစ်ခုပင်ရှိနေသည်။ ၄ နာရီ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားဟိုတယ်များကအလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုပေးသော်လည်းဟိုတယ် Mariam တွင်သင်နေထိုင်မှသာဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ရှာတွေ့သည်။
လည်း အစ္စရေးအရှေ့ပိုင်းက Petra ကိုလေ့လာရေးခရီးလည်းရှိတယ်။ အစ္စရေးနှင့်ယော်ဒန်မြစ်အကြားနယ်စပ်မှတ်တိုင် ၃ ခုရှိသည်။ Allenby တံတား၊ Eilat နှင့် Beit Shean ။ ယခင်ဂျေရုဆလင်ကိုအာမန်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။ သို့သော်သင်ကဂျော်ဒန်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြိုတင်ရရှိရမည်။ Crossing လုပ်တာဟာမရှုပ်ထွေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တော်တော်များများကြာတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်တယ်။ ပိုစျေးကြီးသော်လည်းကောင်းကောင်းဆီစားနိုင်သည့်ခရီးကိုသင်ဘွတ်ကင်လုပ်လိုပေမည်။
၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသော site တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသခံများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့လမ်းပြများအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသော်လည်း၎င်းကိုလွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်သည်။ သို့သော်စာမေးပွဲအပြည့်အစုံပြုလုပ်ရန်လေးငါးရက်အထိအကြံပေးသူများရှိပါသည်။ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲငါနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုသည်လုံလောက်သည်။ တစ်နေ့ကျရင်မင်းဘာမှမသွားဘူးလို့ခံစားရပြီးအိပ်မောကျသွားလိမ့်မယ်။ နှစ်ခုအပြည့်အဝရက်နှင့်အတူလုံလောက်ပါတယ်.
Wadi Musa သည်ပန်းခြံ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်ရှိသောခေတ်မီမြို့တော်ဖြစ်သည်ယနေ့လူ ဦး ရေသုံးသောင်းခန့်ရှိသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြည့်နေတယ်အကယ်၍ သင်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းချင်လျှင်၊ ဟိုတယ်များနှင့်အခြားနေရာထိုင်ခင်း။ ဖော်ရွေသောလူများနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးသင်လိုချင်ပါကပန်းခြံနှင့်နီးရန်သင်ဒီမှာနေနိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင်အပျက်အယွင်းများကိုပင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ပန်းခြံဘေးတွင်ကားရပ်နားရန်နေရာနှင့်အမ်မန်သို့မဟုတ်အေကာဘာသို့ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ရှိသည်။
လက်မှတ်တွေကမသက်သာပါဘူး သို့သော်သင်လည်ပတ်မှုအတွက်သင် ပိုမို၍ အချိန်ပိုချွေတာသည်။ အနည်းဆုံးတစ်ညဂျော်ဒန်တွင်နေထိုင်သောသူများအတွက်တစ်ရက်လက်မှတ်သည် ၅၀ JD၊ နှစ်ရက် ၅၅ နှင့်သုံးရက် ၆၀ JD တို့ကျသင့်သည်။ Petra သင်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည် ၉၀၊ ၄၀ နှင့် ၅၀ ဖြစ်သည်။ အသီးသီး။ ညတွင်နေပြီးဒုတိယနေ့၌အပျက်အစီးများကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပါက 50 JD ပြန်အမ်းငွေကိုသင်ရရှိမည်။
အကယ်၍ သင်ညတည်းခိုခြင်းမရှိပါကဝန်ခံချက်မှာ ၉၀ JD ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတင်ပြရပါမယ်။ ၎င်းကို before ည့်သည်စင်တာသို့သင်မလာမီသို့မဟုတ်လာသောအခါသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ပေးဆောင် ငွေသားသို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်။ သူတို့အဆိုပြုထား သုံးရှုခင်းခရီးစဉ်:
Camino ကျောင်းအုပ်သည် ၄ ​​ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့် ၅၀ JD ကုန်ကျသည်။
ပင်မလမ်းနှင့်ယဇ်ပူဇော်သည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး သည် ၆ ကီလိုမီတာရှည်သည်
အဓိကလမ်း + ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ၈ ကီလိုမီတာပြေးသည်။
ဤခရီးစဉ်များကိုတရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအခြားသူများကိုယခုနိုဝင်ဘာလတွင်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ ကားဂိတ်တွေလည်းရှိတယ်: နှစ်ခုရှိပါတယ်, တ ဦး တည်း,4JD မှာ, km ည့်သည်စင်တာဘဏ္theာရေးနှင့်အတူ (20 ပတ်ပတ်လည်), 8 ကီလိုမီတာ) ကိုဆက်သွယ်; နှင့်အခြား JD 40 များအတွက်ပြတိုက် (ပတ်ပတ်လည်, XNUMX ကီလိုမီတာ) နှင့်ပြတိုက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်။ သူတို့ကလူနှစ်ယောက်အတွက်ကားတွေပါ။
ပက်ထရာသို့အလည်အပတ်ခရီးကိုအခြေခံအားဖြင့်မသွားနိုင်ပါ။ Bab Al Siq၊ ဆည်၊ Siq၊ ဘဏ္Treာရေးဌာနသို့မဟုတ် Al Khazna (မြို့၏ထင်ရှားသောစာတိုက်မျက်နှာစာ)၊ ပြဇာတ်ရုံတစ်ခု၊ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိအခြားမျက်နှာစာများ၊ Silk Tomb, Urn Tomb, နန်းတော်သင်္ချိုင်း၊ ကောရိန္သုသင်္ချိုင်း၊ ရောမသုသာန်၊ Columns လမ်း၊ Great Temple၊ ပက်ထရာဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Winged Lions ဘုရားကျောင်း၊ ယဇ်ပူဇော်ရာနေရာ၊ ရောမစစ်သား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » လမ်းပြ » ဂျော်ဒန်ဘဏ္theာရေး Petra ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ
ရောမမှာပျော်မွေ့ရန်9အခမဲ့အရာ